FAALLO: Aafada Musuq-maasuqa iyo Maamul-xumida Somalia – Warfaafiye:
FAALLO: Aafada Musuq-maasuqa iyo Maamul-xumida Somalia
Ali Mohyadin Jan 6, 2018 0
Halista duruufaha la noolaasaha qabyaaladda, firqooyinka is-diiddan ee diiniga ah, musuqmaasuqa, maamul-xumida iyo isticmaalka maandooriyaha caleenta cagaaran ee Jaadka, waxay si ba’an u saameeyeen tiirarka saldhigga u ah jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed, kuwaaasoo dadyowga adduunku aan kaga kasbanay inay noo arkaan, inaan nahay ummad dalkooda aan laga xushmayn qiyaamka waddaniyadda, nidaamka dowladnimo, xasilooni siyaasadeed iyo midnimo qaran intaba.
Waxaa sidoo kale na loo arkaa in aan nahay, ummad aan awoodin inay ka xoroobi karaan, ku hoos noolaasha dawirsiga beesha caalamka, fowdada maamul-beeleedyada iyo in sidoö kale inaan nahay dad la noolaan kara xaaladaha qalafsan ee dowlad la’aanta iyo sharci la’aantuba ay saldhigga u yihin. Waxaa ugu darran, qaar ka mid ah siyaasiyiin iyo canaasiir kaleba oo ay ku qalan-jebiyeen sharaf dhaca, ayaa la arkaa iyagoo u dacwad taga ama u gudbiya warar kale oo xasaasi ah, dowlado kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa deriska ah, Khaliijka Carbeed ama ururo shisheeye ah.
Waxaa kaloo si loola yaabay loo arkay, Madax Maamul-goboleedyo heshiisyo la gelaaya dowlado iyo shirkado shisheeye ah, booqashooyin ay ku tagaayaan dalal kale. qaylo dhaana u dirsada marka ay duruufo adag la soo daresto, waxa loogu yeeray beesha calamka, iyaga oo is-iloowsiinaya jiritaanka dowladdooda dhexe ee Federaalka ah.
Dowlado badan ayaa dadkooda uga diga cawaaq-xumida laga dhexli karo, haddii dal kala qayb-qaybsamo sida Somalia oo kale, Waa dal shisheeye u sameeyeen federaal foowdaawi ah, kuna aasteysan qaab-beeleednimo ah. Iyadoo dhanka kale, Soomaaliya lagu tilmaamo waddan uu ka jiro dib u dhac la xiriira dhaqamo soo jireen haraadi ah, kuna saleysan asal reer-guuraanimo bidaa’i ah, iyo musuqumaasuq guun ah, lana degay caddaladdii ijtimaaciga, horumarkii guud iyo kalsoonidii dadweynaha, sidaas darteedna, waxaan dunida ka kasbanay quursi aan Ummad kale loo quurin in loo geesto, marka la eego loolanka bulshooyinka aadamigu ay ugu jiraan hiigsiga cilmiga iyo tiknolojiyadda laga dheehan karo horumarinta xadaaradaha nololeyd ee casriga ah.
Heerka musumaasuqa ka jira dalalka dunida, Soomaaliya waxay si joogta ah u taal halka ugu hooseeya marka la darsaayo xaqiiqooyinka dhabta ah ee heerka musuqmaasuqeedu oo aan lagu arag mid u dhigma, la barbar dhigi karo ama la mid ah, kana jira caalamka oo idil. Yacnii maba jiro dal fashilmay oo saaran dunida guudkeeda, lana wadaagi kara Somalia heerka min-qiyaaskaas oo kale. Sidaas darteed dowladaha caalamka ayaa nagu tilmaama in aan nahay dal kala daatay oo jiritaankiisu halis ku jiro, waxayna giddigood ka simman yihiin, inay xaggii Alle u sii jeestaan, marka la soo hadal qaado xaaladda Somalia oo kale.
Mareykanka wuxuu hadda soo saaray amar lagu joojinaayo wixii kaalmo ah ee aada dhinaca ciidammada qalabka sida, waxaana dowladda Soomaaliyeed lagu eedeeyay iny tahay maamul taag-darran oo aan ka hortagi karin fadqalalada, maamul-xumida iyo musuqmaasuq xad-gudbay, kuna baahay Ciidamada Qalabka sida iyo sidoo kale haanaankii difaaca qaran iyo guud ahaan horumarkii dib-u dhiska cidaamada qalabka sida. Waxaa hadda abuurantay welwel ah sida ay arrintaan saameeyn ugu yeelan karto rajadii awalba iska-yareed, lagana qabay in Golaha Ammaanka QM ka qaado Somalia xayiraaddii hubka.
Dhanka kalena, xaggii loolanka siyaasadeed ee dimoqraadiga ah, ayaa waxaa ku soo kordhay in si sharci darro ah loo isticmaalo ciidamadii loogu talagalay la dagaalanka argagixisada. Waxaa soo if-baxay in loo adeegsado dil, argagaxin iyo cabsigelin, si loogu cabburiyo xuriyadda hadalka kuna saleysan doodaha iyo ra’yi is-dhaafsiga muwaadinka ama Ururada mujtamaca madaniga ah. Siyaasiyiin wax ku ool ah ayaa la bilaabay in la beegsado, loo xiro ra’igooda wax toosinta ah, lagu weeraro guryahooda, laguna daadsho dhiig. Halka, qaar kalena oo ay ka mid yihein xildhibaanno loogu goodiyay xaasanad ka qaadis iyo cabsigelin iyagoo lagu eedeenaayo Qaran-dumisnimo. Talaabooyinka ceynkaas ahi, waxaa ugu dambeeyay weerar hubeysan in lagu qaado qoyska iyo guriga Guddoomiyihii Golaha dib u eegista Dastuurka.
Sidoo kale, waxaa muwaadiniyiinta, siyaasiyiinta iyo ururada rayidka looga digay inay iskugu imaan karin shirr ama kulumo siyaasadeed iyo kuwo bulsho oo aan lala socon midkoodna. Adeegsiga NISA iyo hubka culus, xarig, handadaad iyo cabburin ayaa ah falsafadda nidaamka Farmaajo, dalkana wuxuu u muuqdaa in lagu soo rogay wax u dabeecad eg sida xukun degdeg ah oo kale.
Dhibka Argagixiso kaliya ma aha masiibada Somalia ka jirta, waxaa kaloo ka jira mu’aamaraad aafeyn ah lagana soo maleego dalalka deriska. Waxaa ugu darran Kenya oo si joogto ah u sameysa xad-gudubyo lid ku ah jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed, waxay horay u soo gashay dhul-biyoodkii Soomaaliyeed ee dhinaca koofureed,gaar haan dhanka xadka ay Soomaaliya kala leeyadahay, iyadoo ay u sameysatay khariidad beenaad oo ay isku balaarinayso. Waxay gacan kaga heshaa Siyaasiyiin macruuf ah iyo dowlado Eurpe ah. Hadda waxay mar kale isku dayeesaa inay qaadato kala bar degmade Buulo Xaawo iyada oo damaceedu yahay in ay sameyso xariiqin xudduudeyd oo toos u galayaa khariidaddii dhul-biyoodkii ku boobeysay.
Gacanta weyn ee Kenya waa Norway oo damc-dhaqaale oo ballaaran ka leh dhulbiyoodka Kenya isku-ballarinayso. Kheyraadka batroolka ayaa ugu muhiimsan sababta boobka oo ku soo beegantay waqti Somalia ay dhulka taal, dadkeedana aan isu talin karin, wada tashan karina, laakinse la moodo inay soo dhaweynaayaan in loo talin karo.
Norway Waxay gacanta ku heysaa qaar ka mid ah Madaxda sare ee Soomaaliya oo heysta dhalashada Norway. Sida Mudane Mohamed Sh. Osman Jawaari oo ah Guddoomiyaa Aqalka Sharci-dejinta iyo Hassan Ali Kheyre oo ah Madaxa Xukuumadda Soomaaliyeed. Shaki kuma jiro inay labada yihiin Norwegian daacad ah, una hoggaansan yihiin, xurmeynta shuruucda, nidaamka iyo difaaca danaha Norwey. Labadaba.